गर्भवती करिनालाई तनावले छाडेन ! – Gazabkonews
गर्भवती करिनालाई तनावले छाडेन !
फिल्म रिफ्युज़ीबाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी चर्चित अभिनेत्री करीना कपुर एक सर्वाधिक चर्चाकि नायिका हुन् । उनले रिफ्युज़ीबाट बेस्ट डेब्यु फिल्मकी नायिकाबाट अवाड जितेकी थिइन् ।नयाँ फिल्म र फोटोशुटका कारण चर्चामा आइरहने करिना दोस्रो सन्तानलाई जन्म दिदैछिन् ।
छोरा तैमुरलाई जन्म दिएको करिब ४ वर्षपछि फेरि परिवारमा नयाँ सदस्य थप गर्न लागेको उनीहरुले औपचारिक जानकारी दिइसकेका छन् ।उनको गर्भावस्थाको फोटो र भिडियोहरु भाईरल भइरहेको छ ।
गर्भावस्थामा पनि उनले थुप्रै तनाबको सामना गरिरहेकी छिन् । केही दिन अघि मात्र उनका काका बलिउडमा अर्को शोक : ऋषि कपुरको निधनको वर्षदिन नपुग्दै भाईको निधन को निधन भएको थियो । निधनको खबर लगत्तै उनी आफ्नो दिदीसँग काकाको घरमा र अन्तिम संस्कारमा समेत पुगेकी थिइन् ।
कहिले उनको फुपुको छोरा जेल चलान भएको त कहिले सारा र ड्रग्स कनेक्सनको कारणले गर्दा उनले तनाब झेलिरहिन् ।
जस्को सुकै अवस्थामा पनि खुलेर हास्न सक्ने गर्भावस्थामा पनि फिट रहेकी करिनाको हट योग (तस्विर सहित) हरुले बलिउडमा हंगामा मच्चाइरहेको छ ।
शनिवार उनी आफ्नो गर्भावस्थाको अन्तिम फोटोसुटमा निस्किएको तस्विरहरु बाहिरिएका छन् । उनले केहि दिन पछि नै बच्चालाई जन्म दिने र आज गरिने फोटोसुट नै उनको अन्तिम फोटोसुट हुने बताइएको छ ।